Global Voices teny Malagasy » Sivana ao Ozbekistan : Arakaraky ny Mampiovà Azy, Vao Mainka Ny Eo Ihany no Eo? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Jolay 2018 7:08 GMT 1	 · Mpanoratra Chris Rickleton Nandika (fr) i Kévin Marceau, imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Ozbekistan, Fanampenam-bava, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina
Oumida Akhmedova. Sary nahazoana alàlana.
Andalam-piovàna i Ozbekistan ankehitriny, izay aloha no lazaina amintsika hatreto. Hatramin'ny nahafatesan'i Islam Karimov  tamin'ny 2016, mpitondra ny firenena nandritra ny telopolo taona teo ho eo, nanokatsokatra ny varavarany ilay repoblika sovietika taloha izay manana mponina 33 tapitrisa. Miha-raisina foana ireo mpizahatany ao amin'ity repoblikan'i Azia Afovoany ity, ary ankehitriny dia mitodika any amin'izao tontolo izao ny fanjakana mba hampiasa vola, hahazoany famatsiambola ary hikolokoloany fifandraisana tsaratsara kokoa miaraka amin'ireo firenena manodidina ny taniny izay tena voahodidina tanteraka. Ny mpandimby an'i Karimov, Shavkat Mirziyoyev , dia nankalaza ampahibemaso ny fandraisana anjaran'ilay mpanoro-hevitra azy taloha, no sady niezaka ny tsy hiresaka momba ireo fotoana maizina nodiavina nandritra ny fitondrana lavabe sy mpamoritra.
Na izany aza, hatraiza no halehan'i Ozbekistan ao anatin'ny finiavany hanatsahatra ny asa an-terivozona  ? Afaka mahatoky ireo fampanantenana nataon'ny fanjakana mba hanafoanana ny fampijaliana any amin'ny fonjan'ny firenena [en]  ve? Hanaiky ny fisiana gazety mpitsikera sy mpanohitra ara-politika, na dia malemy aza, ve ny fanjakana?
Ny fitsapana mpamaritra mba hanombanana ny hery ananan'ny fanjakana ozbeky hialàny amin'ny lasany mpanao didy jadona dia ny an'ny taokanto. Teo ambanin'ny fitondran'i Islam Karimov, izay ny fitondrana dia nanomboka tamin'ny vanim-potoana sovietika, ny famokarana sarimihetsika, ara-tsary, ara-kira ary ireo rehetra endrika fanehoana ny taokanto dia voasivana avokoa, izay mandray anjara amin'ny famoronana tontolo manimba ny fanehoana ny hevitry ny tena.
Iray amin'ireo ohatra azo raisina tamin'ity fomba ity ny fiampangana enin-taona an-tranomaizina an'i Oumida Akhmedova, ilay vehivavy mpakasary sy mpamokatra sarimihetsika, tamin'ny fiandohan'ny taona 2010 taorian'ny niampangana azy ho naniratsira sy nanala baraka teo ambanin'ny andinin-dalàna139 sy 140 ao amin'ny fehezandalàna famaizana ozbeky. Ny helony? Nampiseho sary mampiseho ny fahantrana eny amin'ireo tontolo ambanivohitra ao Ozbekistan, izay manohitra ny tantaran'ny fahombiazan'ny firenena naparitaky ny haino aman-jerim-panjakàna. Navotsotra avy hatrany izy saingy mbola manana firaketana heloka foana hatramin'izao.
Efa nitafa tamin'i Oumida Akhmedova  ny Global Voices tamin'ny 2015. Niverina niresaka taminy indray izahay tamin'ny jona 2018, volana vitsivitsy taorian'ny nahazoany fanasàna somary mampiahiahy sady vao voalohany mba hampisehoany ireo sary farany nopihany any amin'ny efitra manokana fampirantiana taokanto ao Tachkent, renivohitra ozbeky. Nasaina hanolotra ny asany miaraka amin'ny vadiny izy, Oleg Karpov, ilay mpamokatra sarimihetsika.
Feno fanantenana ve izy momba ny hoavin'ny taokanto ao amin'ny firenena be mponina indrindra ao amin'ny faritra ? Tsia avy hatrany.
Global Voices: Oumida, tena zavatra maro no niseho hatramin'ny fotoana farany niresahantsika ! Nahagaga anao ve ny nanomezana anao alalana, vao voalohany indrindra, hikarakara fampirantiana ao Tachkent tamin'ny taona lasa?
Oumida Akhmedova: Tsy hoe nomena alalana hanao izany izahay, ny tena marina, naros taminay ny hevitra ary tsy dia nahagaga anay loatra. Hatramin'ny voalohany, nazava be fa tsy tamin'ny fomba tsy miankina no nandraisan'ilay efitra fampirantiana ity fanapahankevitra ity fa tafiditra anatin'ny tetiky ny fitondràna izy. Tamin'izany fotoana izany ihany, nikasa ny hankany Etazonia ny filoha Miriziyoyev ary niasa fatratra ireo manampahefana mba hanatsarana ny endriky ny firenena. Noho izany, nahoana izahay no naharay ilay fanasàna? Satria eto aho no mipetraka ! Na inona na inona, tsy dia tena «tsara fanahy » ny lohahevitr'ilay fampirantianay (amin'ny fomba fijerin'ny fanjakana) ; lohateniny ny hoe «Lanitra menamenatra» mifanohitra amin'ny « Lanitra tony an'i Karimov » izay nolazaina nandritra ireo fanomezam-boninahitra nomen'ny Fanjakana azy.
Asehon'ny zavatra niainan'ny fisintahana sovietika fa azo atao tsara ny milalao ny lalaon'ny fanjakana, na dia fotoana fohy fotsiny aza, rehefa omena vidiny tampoka ny tolotra omenao. Afaka mampiseho ny fanoheranao amin'ny alalan'ny fanoherana malefaka isika, ary nanapaka hevitra ny hilalao ity lalao manalasala ity.
Fa kosa, ny anaran'ilay fampirantiana «Lanitra menamenatra» ampiarahina amin'ny fitohizana lahatsary maro nampiasainay dia nanome endrika mpanohitra sovietika ilay fampirantiana. Mazava ho azy, somary sovietika ny endrik'ilay paikady nampiasain'ny fitondràna: rehefa tonga ny alina, nisy olona tonga nitifitra tamin'ny basy rivotra ireo takela misy fitaratra tamin'ilay efitra fampirantiana !
GV: Mihevitra marina ve ianareo fa noho ny fampirantiana nataonareo no nahatonga izany?
OA: Niezaka ny handresy lahatra ahy ny tompon'ilay efitra fampirantiana fa tsy ny fampirantiako no antony. Nilaza tamiko izy fa efa tratran'ny sangy ratsy toa izao ihany koa izy taloha, saigy mihevitra izaho sy Oleg fa ilay fampirantiana no antony.
GV: Toa zavatra maro no niova teo ambanin'ny fitantanan'i Shavkat Mirziyoyev, fa maro ihany koa ireo zavatra tsy niova. Miombon-kevitra amin'izany ve ianao?
OA: Maro ny zavatra niova. Efa afaka maka sary ao amin'ny ‘métro’-n'i Tachkent ohatra. [Fanamarihana avy amin'ny fanoratàna: Teo ambanin'ny fitondran'i Islam Karimov, voarara ny maka sary tany anatin'ire tobin'ny métro ao Tachkent, noheverina toy ny «lasibatra stratejika » izy ireny]. Nihatsara ny toedraharaha teny amin'ny seranam-piaramanidina sy teny amin'ny sisintany. Efa misy fehezana fanalefahana ny fahazoana visas izao e amin'i Ozbekistan sy i Tadijikistan, mpifanolobodirindrina amintsika. Naverina nosokafana ny lalambe sasany [eny amin'ny sisintany] izay nohidian'i Karimov. Ary mazava ho azy, gadra politika maro no navotsotra.
Kanefa, mbola sahirana amin'ny fankatoavana azy ireo ihany ny haino amanjery vahiny ary mbola voasivana ireo tranonkala aterineto an'ny mpanohitra. Ny tananan'i Tachkent dia an-dalam-paharavàana amin'ny fomba tsy ampy fieritreretana [noho ny fitroaran'ny fanamboarana tranobe]. Toy ny taloha, tsy maintsy mitady asa any ivelany ireo Ozbeky. Manasa ireo Ozbeky hody avy any an-tsesitany ny Filoha, saingy voasambotra ireto farany rehefa tafaverina, na eo aza ny efa maha-olom-pirenena amin'ny firenen-kafa ny sasany amin'izy ireo. Fambara mampiahiahy izany! Tsy natomboka ny tena fanavaozana, saritsarim-panavaozana fotsiny. Naverina narafitra indray ny elita politika, fa tsy voatery ho amin'ny tsara.
Fampiroboroboana ilay fampiratiana ”Lanitra menamenatra ” an'i Oumida Akhmedova. Sary nahazoana alàlana.
GV: Vao haingana aho no nahita fa sarin'ny fahantrana ao Ozbekistan no nozaraina teny amin'ireo fantsona an'ny fanjakana, ary noho izany heloka izany indrindra no naha voasazy anao. Midika ve izany fa efa miha-tsara ny toejavatra ho an'ny mpanakanto? Amin'ny lafiny inona no hiasan'ireo politika ireo fiantraikany ho an'ny kanto? Inona no lohahevitra mbola tsy azon'ny artista resahana?
OA: Tena azoko antoka tanteraka fa tsy mbola niova ny toejavatra ho an'ny mpanakanto, tsotra fotsiny, satria tsy mbola afaka nikarakara fampiratiana tao anatina efitra tsy miankina izahay. Mbola natokana ho an'ny tetikasa ideolojika miengentsangetsana sy poakaty irery ihany ny laharampahamehana, toy «ny vakoka ara-kolotsainan'ny Ozbekistan any anatin'ireo fihaonana manerana izao tontolo izao. »
Indraindray sahy mampiseho fiainana tsy dia maharevo ny fampielezankevitra ofisialy, fa amin'ny fomba voafantina foana, ary rehefa omen'ny Filoha alàlana irery ihany. Ny zavatra tsy azon'ny mpanakanto atao? Mitsikera ny fanjakana vaovao, ny fanavaozana na ny Filoha, na koa ny miresaka mikasika ny fifandraisana amin'i Rosia izay mbola tafiditra anatin'ny resaka fanjanahana maoderina.
[Fanamarihan'ny fanoratàna : Nanambara [en]  ny delegasiona ozbeky, vao haingana, fa tsy hahakasika ny zon'ireo olontsotra pelaka (LGBT) ireo fanavaozana ao amin'ny firenena. Mbola tsy ara-dalàna foana ny fiarahan'ny mitovy fananahana ao amin'ny firenena. Mpandalina sasany no nahamarika fa mihamiraikitra lalindalina kokoa [en]  ao amin'ny fitondrana vaovao ny firaketana ny lova ara-tsosialy, izay mibaribary fa misy idiran'ny sivana.]
GV: Ny vadinao, Oleg, dia mpamokatra sarimihetsika. Nahatsapa fiovana ve izy?
OA: Mamokatra ary hanohy ny hamokatra sarimihetsika foana i Oleg, ary tsy tonga ao an-tsainy mihitsy ny handeha hangataka fahazoandàlana na amin'iza na amin'iza. Raharaha hafa ny miasa miaraka amin'ny fikambanan'ny mpanao sarimihetsika sy ny mikarakara fety. Mihevitra aho fa tsy maniry ny hanao izany izy, ary na inona na inona ny perestroika (ireo fanavaozana] ataonay dia tsy manome anay ny fahafahana aloha amin'izao fotoana izao. Nampandefa sarimihetsika sasantsasany izahay, tao amin'ilay efitra nanaovanay fampiratiana ihany, fa niatrika olana izahay satria tsy te-haka risika ireo mpikarakara. Tsy manao fandefasana tao intsony izahay.
Tsara vakiana ihany koa : Oumida Akhmedova miresaka ny lanjan'ny sivana sy ny zava-misy iainan'ny mpanakanto ao Ozbekistan (fr). 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/17/122689/
 Islam Karimov: https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam_Karimov
 Shavkat Mirziyoyev: https://fr.wikipedia.org/wiki/Shavkat_Mirziyoyev
 asa an-terivozona: https://www.hrw.org/fr/news/2017/06/27/ouzbekistan-travail-force-dans-le-cadre-de-projets-finances-par-la-banque-mondiale
 fonjan'ny firenena [en]: https://www.opendemocracy.net/od-russia/fergana-news/in-uzbekistan-s-jails-torture-is-everyday-occurrence
 Oumida Akhmedova: https://fr.globalvoices.org/2015/09/13/190203/
 Nanambara [en]: https://www.reuters.com/article/us-uzbekistan-rights/anything-you-want-except-gay-rights-uzbekistan-tells-u-n-idUSKCN1IO2OA
 mihamiraikitra lalindalina kokoa [en]: https://eurasianet.org/s/uzbekistans-morality-guardians-claim-win-as-turkish-soap-is-dropped-from-air